Simple Moisturizing Gel 150ml – SUNNY eSTORE
Simple Moisturizing Gel 150ml
Simple Moisturizing Facial Wash မျက်နှာသစ်ဆေးသည် 100% ဆပ်ပြာမပါဝင်ပါ။
မျက်နှာသစ်ပြီးနောက် မိတ်ကပ်များ၊ အညစ်အကြေးနှင့်အဆီတွေကို ပြောင်စင်သွားမှာြဖစ်ပြီးအသားအရေအားသန့်ရှင်းလာပြီး ဆဲလ်အသစ်များကိုပြန်လည်ရှင်သန်စေပြီးအသားအရေကို ပိုမိုကျန်းမာလာစေပါတယ်။Sensative အသားအရေအတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။အသားအရေကိုအမှန်တကယ် ကောင်းမွန်စေသည့်ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအသားအရေကိုစိုပြည်စေသည့်အာဟာရပြည့်ဝစေရန်နှင့် Triple Purified Water နှင့်ဗီတာမင်များပါ ၀ င်သည်။
အနံမပါ အရောင်မပါ အရက်ပြန်မပါ အားပြင်းတဲ့ဓာတုပစ္စည်းမပါ Dermatologically tested and approved. Ophtalmologically tested. Hypoallergenic, non-comedogenic.
အသုံးပြုပုံ-လက်ဖဝါးထဲသို့အနည်းငယ်ထည့်ပါ၊ပြီးလျှင်စိုစွတ်နေသော မျက်နှာပြင်ကို အမြုတ်များ ဖြင့် စက်ဝိုင်းပုံစံပွတ်ပြီးရေဖြင့်သန့်စင်စွာဆေးကြောပါ။
သန့်စင်ပြီးနောက် ရေဓာတ်ပြည့်ဝပြီး သန့်စင်သွားသောမျက်နှာလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီ။